Home » သတင်း » ကဲန် Truong အမေရိကတိုက်၏ FOR-တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ Named
ကဲန် Truong အမေရိကတိုက်၏ FOR-တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ Named
ထင်းရူးပင်,, CA - FOR-တစ်ဦးကအမေရိက၏ကော်ပိုရေးရှင်းကယင်းအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်အသံစနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူမစ္စတာကဲန် Truong အမေရိကတိုက်၏ FOR-တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်း, ထိရောက်သောသြဂုတ်လ 1st သမ္မတအမည်ရှိထားပြီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Truong FOR-တစ်ဦးအဘို့ယခင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
FOR-တစ်ဦးနှင့်အတူ Truong ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာနှင့်ထို့နောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောကာလအတွင်း 18 နှစ်ပေါင်းသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
"အစဉ်အဆက်ထက်တင်းကျပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြုံငုံထုတ်ကုန်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူနဲ့ဖွင့်မယ့်ပြီးပြည့်စုံသော IP ကိုမှကတိကဝတ်များနှင့် 12G-SDI အခြေခံအဆောက်အအုံ-တစ်ဦးက FOR, ဒီငါ့ကိုဒီအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူဘို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Truong ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်ကျောက်အစိုင်အခဲနည်းပညာအတွက်ရှည်လျားသော-ကျင်းပအစဉ်အလာရှိသည်။ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နှင့်တွေ့ဆုံသောလမ်းအတွက်အစဉ်အလာကိုဆက်လက် FOR-တစ်ဦးကအမေရိက၏ကော်ပိုရေးရှင်း၏သမ္မတသစ်အဖြစ်အကြှနျုပျ၏ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်တယ်။ "
Truong FOR-တစ်ဦးကကုမ္ပဏီလီမိတက်အထွေထွေမန်နေဂျာစီမံကိန်းဌာနခွဲမှ FOR-တစ်ဦးကအမေရိကသမ္မတကနေရာထူးတိုးထားပြီးခဲ့သူမစ္စတာ Hiro Tanoue အစားထိုးထားသည်။ Tanoue ယခုကုမ္ပဏီ၏တိုကျိုရုံးချုပ်အခြေစိုက်လိမ့်မည်။
Truong FOR-တစ်ဦးကထင်းရူးပင်, CA. အတွက်ရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းခြေရုံးထဲကလည်ပတ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် သူက (714) 894-3311 မှာသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်:truong@for-a.com
တစ်ဦးအပြည့်အဝအကွာအဝေးများအတွက် HD နှင့် 4K ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အိုင်ပီ-based ထုတ်ကုန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့သွားရောက်www.for-a.com.
ASG အားကစားဗီဒီယို Group မှစပွန်ဆာနှင့်အတူအားကစားဗီဒီယိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထောက်ပံ့ - ဇူလိုင်လ 17, 2018
အသံလွှင့် Pix EMEA အရောင်း Lead မှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါရင့် Carlo Bolognesi - ဇူလိုင်လ 12, 2018
သက်သေပြချက်ကိုအင်တာနက်နည်းပညာပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများအသုံးပြုပုံအဝေးမှစစ်ဘေးနှင့်မုန်တိုင်း-ထိခိုက်နစ်နာတည်နေရာကနေအစိုင်အခဲ Connections ကို Making - ဇူလိုင်လ 9, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ FOR-တစ်ဦးက ပေါင်းစည်းမှု ကဲန် Truong ပုဂ္ဂိုလ်များသတင်း SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း	2017-09-13
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ် Marketing Manager
နောက်တစ်ခု: IBC သတင်းများ: Fortium Aspera နှင့်အတူMediaSeal®နယူးလုံခြုံရေးဆန့်ကျင် Ransomware Feature ကိုဖော်ပြပေး
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ကဲန် Truong အမေရိကတိုက်၏ FOR-တစ်ဦးကကော်ပိုရေးရှင်း၏ဥက္ကဋ္ဌ Named" ။ http://www.broadcastbeat.com/ken-truong-named-president-of-for-a-corporation-of-america/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။